Okraina · Febroary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Okraina · Febroary, 2014
Tantara mikasika ny Okraina tamin'ny Febroary, 2014
Ny Lapa Tsara Tarehin'i Yanukovitch Ao Rosia
Rosia 26 Febroary 2014
Ekena fa efa zava-mahazatra an'ireo Rosiana ny ohatra omen'ireo mpisehatra politika any aminy amin'ny resaka harena sy ny tsy fahaiza-manavaka ny ratsy sy ny tsara, satria mitete tsy tapaka ety anaty aterineto ny sarin'ny toeram-ponenan'izy ireo.
#EuroMaidan Mpamonjy Voina Voatifitra Teo Amin'ny Tenda, Mibitsika hoe : “Velona aho!”
Fahasalamàna 24 Febroary 2014
Voan'ny tifitry ny mpitifitra miafina teo amin'ny tenda i Olesya Zhukovskaya, ary mbola nahavita nibitsika hoe "maty aho". Fahamaivamaivanana goavana no tsapa nanerana izao tontolo izao nony re fa velona soa aman-tsara ihany izy.
Araho Mivantana Ny Fihetsiketsehana #Euromaidan Ao Okraina
Fanoherana 23 Febroary 2014
Niafara tamin'ny famoizan'ain'olona goavana ny fifandonana teo amin'ny olom-pirenana an'hetsiny sy ny herim-pamoretan'ny governemanta nandritra ny fihetsiketsehana tao Okraina ny harivan'ny 18 Febroary.
Fanoherana 21 Febroary 2014
Rosia 20 Febroary 2014
Fanoherana 04 Febroary 2014
Andao hojerena ny lafiny ao amin'ny fihetsiketseham-panoherana ny governemanta ao Okraina, antsoina hoe Euromaiden tsy mba asehon'ny gazety be mpanaraka.